Ngabe izilwane zinabalingiswa nezici? - Mytika Speak
Ikhaya / Abalingiswa Nezici / Ngabe izilwane zinabalingiswa nezici?
Izilwane zihlukile izinhlamvu futhi izici.
Abanye abantu bangakuthola kunzima ukubona lapho izilwane zikhombisa ukumamatheka, ukudabuka, injabulo, njll. Lapho ubona lezi zinkulumo ezihlukile, kusobala ukuthi izilwane zinazo ngempela izici.
Ngokubheka lapho isilwane sinobudlova, sinamathela, sinothando, njll. ... isimilo sesilwane siyabonakala.
Izilwane zinezici ezithile, ngisho nalezo ezivela kudoti ofanayo zinemfanelo ezenza zihluke. Kuyahlekisa ukuthi izilwane ezifuywayo zingafana kanjani nabanikazi bazo futhi zithuthukise imikhuba ngokususelwa endaweni yazo.
Ngizwile izindaba eziningana ngezilwane ngisho nabantu ezikhuliswe ngezinhlobo ezahlukene. Kulezi zimo, lezo ezifundiswe abanye, ziziphatha futhi zabelana ngezindlela ezifanayo nezomndeni wazo.
Amathegiizilwane uhlamvu ukuqonda ukukhula komuntu siqu ingokomoya izici